शानदार जितका साथ फूलबारी गाईज फाइनलमा – Khel Dainik
शानदार जितका साथ फूलबारी गाईज फाइनलमा
बुटवल (खेलदैनिक) । कप्तान सबी गुरुङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दुई गोल गरेपछि फूलबारी गाईज, बुटवल जारी शुद्धोदन गाउँपालिका आठौं फर्साटिकर कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा फूलबारीले शुरुवाती गोल खाएर पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै सुनौलौ संगम युवा क्लब, देवीनगरलाई ५–१ ले हरायो । शुद्धोदन–४ बर्मेलीटोल स्थित फर्साटिकर माविको खेलमैदानमा भएको खेलमा सुनौलोका लागि खेलको १६औं मिनटमै राजिव लोप्चनले विपक्षी गोलरक्षकलाई बिट गर्दै बक्सभित्रबाट गोल गर्न सफल भए ।
तर, सुनौलोले त्यो अग्रता धेरैबेर जोगाउन सकेन । पहिलो हाफ कै २६औं मिनटमा कप्तान सबी गुरुङले बक्स बाहिरबाट गरेको सटिक प्रहार गोलपोष्टको बाँया कुना हुँदै बलले जाली चुमेको थियो । त्यो बराबरी गोलसँगै लयमा फर्किएको फूलबारीका लागि ३४औं मिनटमा क्षितिराज जिटीले बक्स बाहिरबाट गरेको अर्को सुन्दर प्रहार सिधै गोलमा परिणत भएको थियो ।
पहिलो हाफसम्म २–१ ले अगाडी रहेको फूलबारीले दोस्रो हाफमा थप तीन गोल गर्न सफल भयो । ५९औं मिनटमा उमेश थापाको क्रस पासमा शरद क्षेत्रीले फूलबारीका लागि तेस्रो गोल गरे । तेस्रो गोल गरे लगतै हौसिएको फूलबारीका लागि ६५औं मिनटमा बक्स भित्र एकल प्रयासमा कप्तान सबी गुरुङले नै व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीका लागि चौथो गोल गरे ।
तर फूलबारी त्यति मै रोकिएन । वैकल्पिक खेलाडीका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका प्रयास तामाङले ७७औं मिनटमा फूलबारीका लागि पाँचौं गोल गर्दै टोलीको शानदार जित सुनिश्चित गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच फूलबारीका कप्तान तथा दुई गोलकर्ता सबी गुरुङ घोषित भए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत पुष २३ गते बिहीबारको दोस्रो सेमिफाइनल खेल अर्को दावेदार टोली सेन्ट्रल कलेज भरतपुर एफसी, चितवन र चाँदनी युवा क्लब, दानापुरबीच हुने खेल संयोजक टेकु भण्डारीले जानकारी दिए ।
फर्साटिकर युवा क्लब, शुद्धोदन गाउँपालिका, फर्साटिकरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद २ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले १ लाख प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने पुष २५ गते शनिबारका दिन हुनेछ ।
← रारा उपाधि नजिक सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्दोको तयारी पूरा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने पुष २२, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? पुष २२, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली पुष २२, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा पुष २२, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित पुष २२, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा पुष २२, २०७७